बिहेमा दाइजो नदिएको भन्दै परिवारले लिए ८ महिनाकी गर्भवती मन्जिताको ज्यान! – Nayabook
बिहेमा दाइजो नदिएको भन्दै परिवारले लिए ८ महिनाकी गर्भवती मन्जिताको ज्यान!
त्यसो त मध्यम वर्गमा छोरीलाई पढाइलेखाइ सक्षम बनाउने चलन नभएको होइन । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि बिहेमा दिइने दाइजोको चिन्ताले भने अभिभावकलाई बढी नै पिरोल्ने गरेको छ । समाजमा ‘इज्जत बचाउन’ कै लागि भए पनि घर/घडेरी बिक्री गर्ने वा ऋण लिएर विवाह गर्ने चलन बढेको छ । कतिसम्म भने दाइजोका रूपमा ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि माग्न थालेका छन् ।
अझ उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने छोरालाई चिकित्सक अध्ययन गराएका अभिभावकले अध्ययन खर्च जोडेर दाइजो लिने गर्छन् भने प्रहरीमा इन्स्पेक्टर र अधिकृतस्तरमा पुगेकाहरूले २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म दाइजो माग्ने गरेका छन् ।यसको अतिरिक्त गरगहना, जिन्सी, सवारी साधनलगायतका सामग्री पनि हाकाहाकी माग्ने चलन देखिन थालेको छ ।
यसै क्रममा दाइजो सम्बन्धित यो घ-टनाको बारेमा सुने पछि तपाईको रग-त पनि उ म्लनेछ। जहाँ एक महिला केहि महिना अगाडि बिहे गरेर श्रीमानको घर सासु-ससुरामा आएकी थिईन। सासु ससुरा आएको केही दिन सम्म सबै ठीक थियो, तर केही दिन पछि ससुरालीहरूले उनलाई दाइजो नदिएको आ-रोपमा बुहारीमाथि दवाव दिन थाले।
स्थानीय हरप्रीत सिंहका अनुसार उनका काका हरजीत सिंहकी छोरी मनजित कौरको २२ अक्टुबरमा सिमरनसँग विवाह भएको थियो। विवाहको समयमा, मनजीताका बुबाले आफ्नो स्थिति अनुसार केटाहरूलाई दाइजो दिए। दाइजो लिइसकेपछि केटाहरू त्यसबेला विवाह गर्न राजी भए। विवाह गर्न सहमत भएपछि, दुबैको बिवाह निकै धुमधामको साथ सम्पन भयो। विवाह सकिसकेपछि उनका माइतीलाइ फेरि दाइजोको लागि मनजितालाई सताउन थाले।
भनिन्छ कि यो दाइजोको कारण हो कि मन्जितका सासु-ससुराले उनलाई ल्याएको दिनमा उनलाई कु टपिट गर्थे। विवाहपछि मन्जिताका परिवारले हरप्रीतलाई आफ्नी छोरीलाई फिर्ता लैजान वा पैसा र दाइजो को माग पूरा गर्न धेरै पटक बोलाउँथे।
घटनाले अझै अचम्मित यसकारण पार्छकी बिवाह गरि ल्याएका उनका श्रीमान भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । सेनामा भए पनि केटाले आफ्नी श्रीमती र उनका बुवालाई जबरज’स्ती दाइजो दिन कर गरेका थिए। अझै अचम्मित पर्ने घ-टना के छ भने उनले बिवाह गरेपछि घरमा आएदेखि नै यस परिवारसंग यस कुराको सामना गरेकी उनि ८ महिनाकी गर्भवती थिईन । यस्तो अवस्थामा श्रीमान सेनामा जागिरे भए पनि आफ्नी गर्भ-वती श्रीमतीको साथ दिएनन बरु उल्टै आफ्नै परिवारको साथ दिएर सधै दवाव दिईनै रहे ।
धुमधाम बिवाह गरि दिएको छोरीलाई यसरि घरमा हेला गर्ने कुट-पिट गर्ने गरेको सुनेपछि मंजिताका बुवा हतारिदै छोरीको घरमा पुगेका थिए । छोरीकोको घरमा पुगिसकेपछि मनजीतका बुबा त्यहाँ को दृश्य देखेर भुइँमा बे’हो’स भै ढ’ले । मनजीतका बुबाका अनुसार उनकी छोरीको ला स ससुराको घरको लबीमा रहेको भेटियो।
आफ्नी छोरीको श-व देखेपछि उनले पुलिसलाई घटनाको बारेमा जानकारी गराए। त्यसपछि पुलिस घट-नास्थलमा पुगे र मंजिताको श-वको मुचुल्का उठाई उनका परिवार बिरुद्ध मु द्दा हा’ले। पुलिसले घटनाको दर्ता गराएपछि उनका त्यो घरमा सबै घर छोडेर अहिले फ-रार रहेका छन् ।